Frank Lampard oo ka hadlay suurtagalnimada uu Hazard ugu biiri karo kooxda Real Madrid – Gool FM
(Yurub) 14 Maajo 2019. Halyeeyga kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka hadlay mustaqbalka Eden Hazard ee garoonka Stamford Bridge, kaddib markii ay soo baxeen warar xan ah ee ku saabsan inuu ku biiri doono Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Saxaafada Yurub ayaa xaqiijisay in Hazard uu ka tagi doono garoonka Stamford Bridge kaddib finalka Europa League, si uu ugu biiro kooxda reer Spain ee Real Madrid.
Laacibka reer Belgian ayaa sidoo kale qiray inuu go’aan ka gaaray mustaqbalkiisa, balse aan si rasmi ah loo shaacin doonin go’aankiisa ilaa iyo kooxdiisa Chelsea uu kala qeyb galayo kulanka finalka Europa League ay kula ciyaari doonaan Arsenal.
Hadaba halyeeyga reer England ee Frank Lampard ayaa qiray in ka tagista Eden Hazard ay guuldaro weyn ku noqon doonto qof kasta, bale wuxuu ugu baaqay inay diirada saaraan kulanka finalka ee Europa League.
“Eden Hazard waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka, Waan ogeyn dhamaanteen arintaas”.
“Shaqsi ahaan waan ogaa awoodiisa ciyaareed tan iyo maalintii ugu horeysay uu nala qaatay tababarka kooxda Chelsea, dhowr sano ka hor, wey adag tahay in la buuxiyo booska ciyaaryahan weyn sida isaga oo kale ah”.
“Waxa ugu muhiimsan haatan ayaa ah diirad saarida kulanka finalka Europa League, kani waa kulanka ugu muhiimsan ee kooxda Chelsea, sababa la xiriira tixgelin badan”.
“Wuxuu noqon doonaa kulan adag ee kooxda Arsenal ah, kaddib waxaan arki doonaa halka uu noqon doono Eden Hazard”.